Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fandram-bolo tsara indrindra any Amerika Avaratra: Mihaona amin'ireo mpamaky bika
Ny Professional Beauty Association (PBA) dia faly manambara ireo mpandresy tamin'ny 2021 North American Hairstyling Awards (NAHA), fifaninanana malaza indrindra amin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy any Amerika Avaratra. NAHA manome voninahitra ny mpanakanto sangany amin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy sy ny talenta famoronana izay manery ny fetran'ny fahaizana sy ny fahaiza-mamorona. Nandritra ny 30 taona mahery, mpanakanto manan-talenta an'arivony no nampiasa ny NAHA ho sehatra hanehoana ny sanganasan'izy ireo handresena ny NAHA tadiavina.
Ny hetsika nohajaina dia natao ny sabotsy 29 aogositra tany Mandalay Bay Resort and Convention Center nandritra ny Cosmoprof Amerika Avaratra (CPNA) tany Las Vegas., Nevada.
NAHA mankalaza ny talenta mitarika eo amin'ny sehatry ny indostria ary manasongadina sokajy hatsarana miisa 15 amin'ny haitao volo sy makiazy, ao anatin'izany ny sokajy Inspiring Salon of the Year sy ny mpanabe ny taona.
“Ity dia taona tsy mbola nisy toy izany ho an'ny NAHA, kanefa ny famoronana sy ny zavakanto nohomboina indrindra dia niavaka indrindra tamin'ny tantaran'ny fifaninanana”, nizara ny Nina Daily, Tale Mpanatanteraka PBA. "Nifamotoana ny indostria hampiditra ny angovo ho amin'ny fanavaozana ifotony sy ny firaisan-kina, ary tsy afaka ny ho reharehan'ny mpandresy, ny finalist ary izay rehetra nanisy fientanam-po sy hery be mba hahombiazana anio hariva."
NAHA 2021 dia natolotry ny mpilalao sarimihetsika malaza A-list ary talen'ny famoronana Living Proof Global Creative Michael Shaun Corby ary nanolotra fampisehoana zavakanto nataon'i Silas Tsang sy ny ekipa Ulta Beauty Pro. Nalefa mivantana ny hetsika ary azo notadiavina ho an'ireo izay tsy afaka nanatrika mivantana.
Ho fanampin'ny lanonana mari-pankasitrahana, ny NAHA 2021 dia nahitana fandraisana karipetra mena mandray ireo finalista NAHA, mpandresy NAHA teo aloha, nitaona ireo mpanentana hatsaran-tarehy, ary olo-malaza tamin'ny seho, ary nampiantranoin'ny Partner Media Partner Salon maoderina ary Anne Morattoalong miaraka amin'ny sary famantarana ny indostria, mpanabe, mpanety ary mpikatroka mafana fo, Rodrick Samuels.
Mpandresy loka 2021 NAHA:
Editorial Stylist an'ny taona- Danielle Keasling
Mpanabe ny taona- Villa Sam
Fandram-bolo- Stephen Moody
Hairstylist an'ny taona- Silas Tsang
Salon manentana ny taona- Salon loko miloko + Spa
Artista makiazy amin'ny taona- Nohemi Capetillo
Master hairstylist an'ny taona- Ruth Roche
Taovolo volon-dehilahy ho an'ny taona- Mpangalatra Almaraz
Mpanaingo volon'ny mpianatra amin'ny taona- Alisha Kemp
Styling sy famaranana- Nick Stenson
Ekipan'ny taona- Julie Vrie